HORDHACA: Kulanka xiisaha badan ee kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club – Gool FM
(Soomaaliya) 25 Maarso 2019. Kooxaha Elman Fc Iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium ee Degmada Cabdicasiis, Ciyaar qeyb ka ah Horyaalka Somali Premier League.
Kooxda kubadda cagta Elman kulanka galabta waxaa dib ugu soo labanaya ciyaaryahankeeda Jamaal kaas oo dhaawac ugu maqnaa kooxdiisa kulamadii ugu dambeyay ay dheehso kooxdiisa.
Wiilasha Muqdisho City Club kulan ciyaareedkan waxaa dhawac ugu maqnaanaya xidigaha kala ah Jaleelow oo dhaawac muruqa ku seegaya kulankan, Banteki oo isagana wali dhaawac ugu maqan iyo Saciid Yamani oo iskagana dhaawac jab ah ku seegaya ciyaartan.
Naadiga Muqdisho City Club ayaa galabta waxaa dib ugu soo laabanaya ciyaaryahan Baanu Kaaso kulankii ugu dambeyay jaalooyin kooxda ugu maqnaa.
Afartii dheel ee ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka waxaa saddex kamid ah badisay naadiga Muqdisho City Club halka kooxda Elman ay adkaatay hal kulan oo qura, taas oo ka dhigan in laga awood roonyahay kooxda Jaalasha ee Elman.
Waa markii ugu horeysay kooxda Muqdisho City Club magaceeda dhawaan galka ah ay kula ciyaarto kooxda Elman, hore waxaa loo oran jiray Banadir Sports Club.
Daadir Aamiin ayaa galabta kulankiise ugu horeyay ka hor imaan doona kooxdiise hore ee Muqdisho City Club isago iminka xiran maaliyada jaalayasha ee Elman.
Sido kale Muqdisho City Club waxaa galabta isagana ka hor imaan doona goolhaye Aweys oo iminka shaqada u ilaaliya kooxda Elman.
Kooxda Muqdisho City Club kulankii ugu dambeyay waxey 5-2 ugu soo adkaatay Naadiga Madbacada Qaranka.
Halka Naadiga Jaalayasha ee Elman ciyaartii ugu dambeysay 3 iyo2 ugu soo awood sheegatay kooxda Jazeera Sports Club.
Labadan kooxod waxey wada leeyihiin mid 10-dhibcood horyaalka midi galabta adkaatay ayaa sara mari doonta, hada waxaa sareysa Elman waxeyna ku jirta booska 4-aad halka Muqdisho City Club ay fadhiso booska 5-aad ee horyaalka.
13/02/2018 Elman FC 2-6 Mogadishu City Club
12/04/2018 Mogadishu City Club 4-2 Elman FC
25/11/2016 Elman FC 1-2 Mogadishu City Club
24/03/2017 Mogadishu City Club 0-1 Elman FC